Famoronana loha hevitra - Hanombohana
Ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny Manoratra taratasy fikarohana
Raha toa ka takiana ny hampiditra ny latabatra ao amin'ny fikarohana fikarohana , dia tokony ho fantatrao fa misy fomba iray ahafahana mamorona io endri-javatra io ao amin'ny Microsoft Word . Mpianatra maro no miezaka mamorona latabatra amin'ny tanana, tsy mampiasa ny fomba amam-panao.
Hadisoana lehibe izany! Tsy azo atao ny mamorona ny teboka marina ary mitandrina tsara ny isa azo ampiasaina mandritra ny fanovana.
Ireo mpianatra dia handao haingana ny famoronana tabilam-bokim-pahalalana amin'ny alàlan'ny fahasorenana, satria tsy dia mivoaka tsara ny elanelam-potoana, ary mety tsy mety ny latabatra raha vao vita ny fanitsiana ny antontan-taratasinao.
Rehefa manaraka ireo dingana ireo ianao, dia hahita fomba tsotra ahafahana maka fotoana vitsivitsy, ary mampisy fahasamihafana eo amin'ny endriky ny taratasy.
Ny loha-dahatsoratra dia tsara indrindra ampiasaina amin'ny lahatsary toy izay azo zaraina amin'ny faritra na toko ao an-toerana. Ho hitanao fa ilaina ny mamorona ampahany amin'ny taratasinao - na rehefa manoratra ianao na aorian'ny nahavitanao ilay taratasy. Na izany na tsy izany dia tsara.
Mampiasa ny Tool Bar
Ny sarimihetsika vokarin'ny Microsoft vokatra (s) nosoratana tamin'ny alalana avy amin'ny Microsoft Corporation.
Voalohany dia mila manamarina fa ny fitaovana ilaina amin'ny fitaovam-pitaovana dia maneho eo an-tampon'ny taratasinao. Ny baikon'ny fitaovana marina dia ny baiko fanoratana ny formata , ary azonao atao ny manokatra izany amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny Hijery sy ny fanindriana ny mpanaraka anao amin'ny Toolbar .
Mila mifidy ny fampiratiana ianao .
Ny dingana manaraka dia ny mampiditra ireo andian-teny izay tianao hipoitra ao amin'ny latabatra fananganana fiara. Ireo no teny - amin'ny endriky ny lohateny - fa ny tetikasa dia miala amin'ny pejyo.
Ampidino ny lohateny
Raha te hamorona toko vaovao na fizarana ny taratasinao, dia mila manome sombin-dahatsoratra amin'ny sehatra ianao. Mety ho tsotra toy ny teny iray, toy ny hoe "Fampidirana." Ity ilay fehezanteny izay hiseho eo amin'ny latabatra misy anao.
Ampidiro ny lohateny, midira eo amin'ny menio eo amin'ny farany ambony eo amin'ny efijery. Avy ao amin'ny menio fanontam-pirinty, fidio ny HEADING 1 . Sorito ny lohatenin'ny lohateny, ary tsindrio RETURN.
Tadidio fa tsy mila mamolavola ny taratasy ianao rehefa manoratra izany. Azonao atao izany rehefa vita ny taratasinao. Raha mila ampidirina lohateny sy mamorona latabatra ianao rehefa vita ny taratasy dia efa mametraka ny cursor eo amin'ny toerana tianao ary mametraka ny lohanao.
Fanamarihana: raha tianao ny hanomboka ny fizarana na ny fizarana tsirairay amin'ny pejy vaovao, mandehana any amin'ny faran'ny fizarana iray na fizarana ary mandehana manindry ary mifidiana Break and Page Break .
Mampiditra ny latabatry ny lahatsoratra
Hamorona ny Loha Hevitra ato
Rehefa voazara ho fizarana ny taratasinao, dia vonona ny hamorona ny latabatra ianao. Efa ho vitanao izany!
Voalohany, mamorona pejy tsy misy eo am-piandohan'ny taratasinao. Ataovy izany amin'ny mandeha am-piandohana ary mifidiana Fidio ary mifidiana ny Break and Page Break .
Avy amin'ny baiko fanalahidy, mandehana manendry , ary farafaharao ny Reference and Index sy Tables avy amin'ny lisitra fidina.
Hanokatra varavarankely iray vaovao.
Mifidiana ny latabatry ny rakitsoratra etsy ambony ary ny mifidy Okay .
Manana latabatra ao anatiny ianao! Aorian'izay dia mety ho liana amin'ny famoronana endritsoratra amin'ny faran'ny taratasy ianao.
Fanavaozana ny taratasy
Loharano ratsy ho an'ny tetikasanao fikarohana
Fikarohana loharano azo antoka
Ahoana no hanoratanao ny Autobiography?
Ahoana no hanoratana taratasy fisoratana?
Understanding the Era Progressive
Ady amin'ny fanoratana taratasy taratasy 20 pejy
Karatra fikarohana momba ny fikarohana
Toro-hevitra momba ny tatitra momba ny tatitra momba ny fitenenana amin'ny kilasinao
Inona no atao hoe taratasy fanadihadiana?
Saripikan'i Richard Angelo mpamono olona
Elements of a hypothesis good
9 lehibe indrindra ao amin'ny "lehilahy misy vy"
Jeografia ao amin'ny Oseana Pasifika
Ny horonan-tsarimihetsika tsara indrindra efa nakany
University of Maryland, Adiresin'ny College Park
Tiger Woods Club mipoaka
Torolalana ho an'ny Adi-hevitra Graduate School
Fampiasana Gerunds tsy misy fampiasana fanampiny
Ahoana ny amin'ny sary hosodoko tamin'ny Masters Old or Books-How To?
Fihetsiketseham-pandehan-drizotra - Ampy ho an'ny mpandeha an-tongotra
Inona no atao hoe Crystal Therapy?
Fomba fitenenana tsara (Oyasuminasai) amin'ny teny Japoney
Ahoana ny fomba hanoratana fehintsoratra momba ny sosiolojia
Fepetra takiana amin'ny fanjakana any San Jose
Ny fikatsahan'i Haiku hitarainana ny traikefa tokana ho an'ny tavy telo
Ny tantaran'ny tany dia misaraka amin'ny fisarahana amin'ny Fiangonana 7
Top 10 horonan-tsary miaraka amin'ny biby miteny
Fahatakarana ny Parlemantan'i Kanada
Inona no fahasamihafana eo amin'ny fepetra ety sy ny fari-pitsipika fototra?
Ahoana ny fanaovana ny Sl Cha Cha